Jaal Marroo Fala roorroo! – OROMP4 Studio
Jaal Marroo dhaloota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Fincilli Diddaa Garbummaa miixatee dhale Hangafoota keessa isa tokko.
Marroon ilmi sabaa kun barnoota sadarkaa 1ffaa, lammaffaa fi qophaa’inaa akkuma xumureen Yuunversiitii Finfinneetti ramadamee muummee barnoota Management keessatti barataa ture. Yerooma barataa ture kanatti gaaffii barattoonni Oromoo Mootummaa abbaa irree irratti kaasaniin wal qabatee hidhamee hidhaas ture. Roorroo kanaan itti dhufeen wal qabatee Fincila Diddaa Garbummaa muddee 2005 labsameen booda barattootaa fi Qeerrowwan Oromoo kallattii isaanii gara Carraa qawwee kaasuuf affeerte keessaa Marroon tokko ta’ee argame.
Jaal Marroo waliin gara fuulduraatti
Jaal Maroon dhaloota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Fincilli Diddaa Garbummaa miixatee dhale Hangafoota keessa isa tokko.
Jaal Marroo waliin gara fuulduraatti!